Volam-panjakana: manomboka izao ny « e-hetra payement » | NewsMada
Volam-panjakana: manomboka izao ny « e-hetra payement »
Nampahafantarina, omaly tao amin’ny hotely Carlton, ny fanombohana fandoavan-ketra « e-hetra payement”. Fomba fandoavan-ketra tsotra amin’ny fampiasana teknoljian’ny serasera ankehitriny, tsy misy ifandraisan’ny sampandraharaha hetra sy ny mpandoa hetra, hanatsarana ny fidiran-ketra, indrindra hialana amin’ny kolikoly. Efa fampiasa any amin’ny firenena maro ity fomba vaovao fandoavan-ketra ity, ary izao ampiharina eto amintsika izao. “Fanjakana manana ny fidiram-bolany avy amin’ny hetra, tsara tantana sy matanjaka, atokisan’ny vahoaka ao aminy”, hoy ny ambasadaoron’i Alemaina eto amintsika, i Michael Derus. Nanampy betsaka tamin’ny fanatanterahana izany ny fanjakana alemà.
Manamora ny fandoavan-ketra izao sy manampy ireo orinasa, tsy mandany fotoana, ao anatin’ny minitra vitsy dia vita! “Ho fanavaozana sy hisian’ny mangarahara ao amin’ny foibe fitantanana ny hetra ny tanjona ”, hoy ny talen’ny DGI, i Germain. Fialana tanteraka amin’ny fampiasana tataratasy na “dematérialisation”. Orinasa vitsivitsy ny nanamarina izany sy ny tombontsoa azony. Ankoatra ny DGI sy ny orinasa, manaiky ny fanatanterahana izao fomba fiasa izao ny banky rehetra eto amin’ny Nosy. Misy tambajotra teknika ifandraisan’izy ireo.
Mitombo ny fidiran-ketra, mitombo, araka izany, koa ny hetra takina satria hita avokoa ny tokony haloa, ary azo antoka fa voatana ny tsiambaratelo rehetra. Hitombo izany ny hetra miditra amin’ny alalan’ny “e-hetra payement”, fa ahoana kosa ny tamberinan’andraikitry ny fanjakana amin’ny vahoaka mpandoa hetra?